4 “Nụrụnụ okwu a, unu nne ehi Beshan,+ ndị nọ n’ugwu Sameria,+ ndị na-erigbu ndị ọ na-enweghị ka ọ hà ha,+ ndị na-echi ndị ogbenye ọnụ n’ala, ndị na-asị ndị nna ha ukwu, ‘Wetanụ, ka anyị ṅụọ!’
2 Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova aṅụwo iyi n’ịdị nsọ ya,+ sị, ‘“Lee! Ụbọchị na-abịakwasị unu. Ọ ga-ejikwa nko nke onye na-egbu anụ kolie unu elu, jirikwa nko azụ̀ kolie ndị fọdụrụ n’ime unu elu.+
3 Unu ga-esi n’ebe a kwaturu akwatu na mgbidi pụọ,+ onye ọ bụla ga na-aga n’eleghị anya n’azụ; a ga-atụgakwa unu na Hamọn,” ka Jehova kwuru.’
4 “‘Bịanụ na Betel mebie iwu.+ Na-emebinụ iwu ọtụtụ ugboro na Gilgal.+ Wetanụ àjà unu n’ụtụtụ; wetakwanụ otu ụzọ n’ụzọ iri unu n’ụbọchị nke atọ.+
5 Sureenụ achịcha koro eko ka ọ bụrụ àjà ekele,+ kpọsaakwanụ onyinye afọ ofufo+ unu na-enye; kwusaanụ ya, n’ihi na ọ bụ nke a na-adị unu mma, unu ụmụ Izrel,’+ ka Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru.
6 “‘Mụ onwe m kwa mere ka ezé unu na-acha ọcha+ n’obodo unu niile, meekwa ka ụkọ ihe oriri dị n’obodo niile unu bi;+ ma unu alọghachikwuteghị m,’+ ka Jehova kwuru.
7 “‘Mụ onwe m kwa gbochiri oké mmiri ozuzo izoro unu mgbe ọ fọrọ ọnwa atọ ka oge owuwe ihe ubi ruo;+ m mekwara ka mmiri zoo n’otu obodo, ma emeghị m ka mmiri zoo n’obodo ọzọ. Mmiri zoro n’otu ibé ala, ma ibé ala nke m na-emeghị ka mmiri zoo na ya kpọrọ nkụ.+
8 Obodo abụọ ma ọ bụ atọ daara gaa n’otu obodo ịga ṅụọ mmiri,+ ha aṅụjughịkwa afọ; ma unu alọghachikwuteghị m,’+ ka Jehova kwuru.
9 “‘Emere m ka ihe unu kụrụ kpọnwụọ, meekwa ka ihe unu kụrụ maa ebu.+ Unu mere ka ubi vaịn unu na ubi unu ndị ọzọ dị ọtụtụ, ma egú ripịara osisi fig unu na osisi oliv unu;+ ma unu alọghachikwuteghị m,’+ ka Jehova kwuru.
10 “‘Ezitere m ọrịa na-efe efe n’etiti unu, ụdị nke rịara Ijipt.+ Eji m mma agha gbuo ụmụ okorobịa unu,+ dọrọkwa ịnyịnya unu n’agha.+ Emekwara m ka ísì ọjọọ nke na-esi n’ebe unu mara ụlọikwuu siba unu n’imi;+ ma unu alọghachikwuteghị m,’+ ka Jehova kwuru.
11 “‘M kwaturu ala unu, dị ka mụ onwe m bụ́ Chineke kwaturu Sọdọm na Gọmọra.+ Unu wee dị ka nkụ a lọpụtara n’ọkụ;+ ma unu alọghachikwuteghị m,’+ ka Jehova kwuru.
12 “Ya mere, ọ bụ ya ka m ga-eme gị, Izrel. Ebe ọ bụ na m ga-eme gị ihe a, jikere izute Chineke gị,+ Izrel.
13 N’ihi na, lee! Onye kpụrụ ugwu niile+ na Onye kere ifufe,+ Onye na-agwa mmadụ ihe ọ na-eche n’echiche,+ Onye na-eme ka chi ọbụbọ ghọọ ọchịchịrị,+ Onye na-aga ije n’ebe ndị dị elu n’ụwa,+ Jehova bụ́ Chineke nke ụsụụ ndị agha bụ aha ya.”+
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D30%26Chapter%3D4%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl